0 Thursday December 06, 2018 - 11:33:01
Ciidamada AMISOM ee duulaanka ku jooga Soomaaliya ayaa dhawaan baahiyay warbixin ay kaga faaloonayaan qeybta caafimaadka ee AMISOM Iyo caqabadaha hortaagan howlahooda, maadaama uu aad u kordhay khasaaraha ka soo gaaraya weerarada ay kala kulmayaan ciidamada Xarakada Al-Shabaab.
0 Saturday December 01, 2018 - 19:03:53
0 Saturday November 03, 2018 - 12:02:18
Horumarka dhanka ganacsiga iyo adeegga bulshada ayaa kusoo badanaya wilaayada islaamiga ah ee Jubooyinka. waxaa bil walba gobolka kusoo biira xarumo ganacsi iyo dhismayaal cusub oo ay Masaajid iyo Hoteello kamid yihiin.
0 Saturday October 13, 2018 - 12:09:54
Kadib munaasabad ballaaran oo ka dhacday magaalada Ceelbuur ayay wilaayada Islaamiga Galguduud diyo ugu kala wareejisay beelo walaala ah oo horay ugu dagaallamay deegaanno hoostaga magaalada Guriceel.
0 Saturday October 13, 2018 - 11:00:35
Xilli uu sii xoogeysanayo dagaalka ka socda deegaannada xeebta ku teedsan ee gobolka Shabeelaha Hoose ayay maleeshiyaadka dowladda Federaalka kasii firxanayaan goobta dagaalka.
0 Saturday October 13, 2018 - 09:32:37
Khasaara lixaad leh ayaa ka dhashay duufaanta loogu magac daray Michael ee ku dhufatay xeebaha gobolla Florida ee dalka Mareykanka.
0 Sunday October 07, 2018 - 10:39:59
Maktabka Zakawaadka ee Wilaayada islaamiga ee Banaadir ayaa lacago kumanaan kun oo dollar ah wuxuu u qeybiyey boqollaal ruux oo shacab fuqaro ah kuwaas oo kamid ah dadka reer Muqdisho.
0 Saturday October 06, 2018 - 13:58:18
0 Thursday October 04, 2018 - 14:15:07
Diyaarado dagaal oo la rumeysan yahay inuu leeyahay Mareykanka ayaa xaley duqeymo wuxuushnimo ka geystay xaafado ka tirsan degmada Ceel-Cadde ee gobolka Gedo, iyadoona duqeymahaas ay geysteen khasaare xoogan oo u badan burbur hanti.
0 Sunday September 30, 2018 - 17:24:27
Dhammaad Qeybaha kala duwan ee Shacabka Soomaaliyeed waxaa laga codsanayaa in ay ka qeyb qaataan dib udhiska isbitaalka Guud ee magaalada Saakoow oo ku burburay duqeyn ay geysteen diyaarado shisheeye.
0 Thursday September 20, 2018 - 13:38:56
Isbitalka Saakow oo muddo aad u dheer loogu soo adeegayay bulshada ayaa gabi ahaanba burburay kadib markii Mareykanku duqeeyay habeen hore.
0 Thursday September 06, 2018 - 16:35:54
Beesha Bartire oo kamid ah qabaa'ilka Soomaaliyeed ayaa Ugaas cusub ku dooratay wilaayada islaamiga ah ee Jubooyinka.
0 Saturday August 25, 2018 - 21:07:34
Shalay gelinkii dambe waxaa gobolka Sh/hoose lagusoo gaba gabeeyay fantayadii loogu dabaal degayay munaasabadda Maalmaha Ciiddul Adxaa.
0 Friday August 24, 2018 - 20:27:09
Dhammaan wilaayaatka islaamiga ah ee dhaca Bartamaha iyo Koonfurta Soomaaliya waxaa lagusoo gaba gabeeyay munaasabado loogu dabaal degayay Ciiddul Adxaa.
0 Thursday August 23, 2018 - 17:10:56
Mu'asasada Alkataa'ib oo ah garabka warbaahineed ee Xarakada Al Shabaab ayaa Filim cusub kasoo saartay dagaalkii khasaaraha badan dhaliyay ee sanadkii hore ka dhacay deegaanka Bariire ee gobolka Sh/Hoose.
0 Thursday August 23, 2018 - 13:16:21
Wilaayaadka Islaamiga ah Waxaa Ka Dhacay Fantasyaha Munaasabada Ciidul-Adxa,
Daawo Sawirrada: Fantasyo loogu Dabaal degayay Munaasabadda Ciidda Oo Ka Dhacay Magaalada Ceelbuur.
0 Wednesday August 22, 2018 - 18:50:08
Wilaayaatka islaamiga ah waxaa wali ka socda Fantasyaha munaasabadda Ciiddul Adxaa oo shacabku kusoo bandhigayaan damaashaad iyo farxad.
0 Visits: 4764 | Wednesday August 22, 2018 - 11:03:13
Magaalada Jilib Oo Si Lama Arag Lama Maqal ah Looga Ciiday [Sawirro].
0 Tuesday August 21, 2018 - 22:01:59
Kumanaan dadweyne ah ayaa maanta isugu yimid fagaare weyn oo ku yaalla degmada Jilib ee xarunta wilaayada Jubooyinka, halkaas oo dadweynuhu ku tukadeen salaadda ciidda, laguna soo bandhigay bandhig ciyaareed ballaaran.
0 Monday August 13, 2018 - 15:53:02
Beeraleyda wilaayada islaamiga ah ee Bay iyo Bakool ayaa sannadkan wax u tacbanaya si ka wanaagsan sannadihii u dambeeyay.
0 Wednesday August 01, 2018 - 20:30:19
Mu'asasada Alkataa'ib ayaa soo saartay filim cajiib ah oo lagu soo bandhigayo weeraro iyo howlgalo ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhigyada iyo kolonyooyinka maleeshiyaatka Soomaalida ee isaga kala gudbaya saldhigyadooda.
0 Tuesday July 24, 2018 - 09:52:21
Jamciyadda kheyriga ah ee Al-Ixsaan ayaa gobolka Sh/hoose, ka wada ol'ole ay ku daaweeneyso xoolaha gaar ahaan Geela oo xanuuno laga sheegayay usbuucyadii lasoo dhaafay.